भारतले किन पत्याउन छाड्यो पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाललाई ?
काठमाडौं । नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध अहिले फरक परिस्थितिमा आइपुगेको छ । नेपालको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतामा प्रहार गर्ने काम भारतले गरेको भन्दै यसको नेपालमा व्यापक विरोध भइरहेको छ । नेपालको अतिक्रमित लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकको भूमि समेटेर भारतले गत नोभेम्बर २ मा आफ्नो राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक ग-यो । जसको नेपालमा व्यापक विरोध भइरहेको छ । काठमाडौं उपत्यकासहित जनकपुर, वीरगञ्ज, नेपालगञ्जलगायतका स्थानमा भारतविरुद्ध चर्काे नाराबाजी गर्दै भारतको कदमप्रति विरोध जनाइएको छ । भारतले सार्वजनिक नक्सा सच्याउनुको सट्टा उल्टै कालीनदी नै हटाएर अर्काे नक्सा सार्वजनिक गरेपछि झनै नेपालकमा भारतविरुद्ध प्रदर्शन भइरहेका छन् ।
नेपालमा भारतविरुद्ध प्रदर्शन भइरहँदा नेपालका लागि राजदूतसमेत भइसकेका भारतीय पूर्व विदेशसचिव श्याम शरणले भारतविरुद्ध नाराबाजी गर्ने र नक्सा सच्याउन विषय उठाएमा नेपाललाई महंगो सावित हुने चेतावनी दिएका छन् । दुई देशबीच देखिएको यो विवाद सुल्झाउन भारत तयार देखिँदैन । भारतले नक्सा सार्वजनिक गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले डाकेको सर्वपक्षीय छलफलमा विचारको राजनीतिक फरक भए पनि राष्ट्रिय सम्प्रभूताप्रति हामी एक छौं भन्ने सुझाव प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससहित विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुले दिए । साथै विज्ञहरुले पनि उक्त भूमि फिर्ता गराउन सरकारले अघि बढ्नु पर्ने सुझाव दिए ।
यिनै सुझावलाई शिरोधार्य गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको विशेष दूतको रुपमा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई भारत पठाउने तयारी गरे । तर, भारतीय पक्षले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेट गर्ने समय उपलब्ध नगराएपछि नेता नेपालको भारत भ्रमण अन्योलमा परेको छ । भारतले पत्याएका तथा भारतनिकट नेताको रुपमा चिनिएका पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाललाई भेट गर्न भारतीय पक्षले समय उपलब्ध नगराउनु नेपाली नेताहरुले भारतमा आफ्नो हैसियत कुन स्तरमा राखेका छन् भन्ने प्रष्टिन्छ । काठमाडौंमा रहने भारतीय राजदूतले सजिलै र आफूले चाहेका बेला प्रधानमन्त्रीदेखि नेताहरुको कोठा कोठामा पुग्ने गरेका छन् । तर, मुलुकको राष्ट्रिय स्वाभिमान र भौगोलिक अखण्डताको रक्षार्थ कुरा गर्न जान खोज्दा भारतले नेता नेपाललाई समय उपलब्ध नगराउनु भारतको व्यवहार र विकसित घटनाक्रमप्रति उसको धारणा स्पष्ट बुझिन्छ । लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नक्सामा समेटेकोबारेमा नेपालले कुटनीतिक नोट समेत भारत पठाएको छ । नोटमा वार्ताको प्रस्ताव पनि छ । यसमा पनि भारतको ठोस जवाफ आएको छैन ।
भारतको सपोर्ट प्राप्त गर्ने नेताको सूचीमा नेता नेपाल पनि पर्छन् । २०६४ सालमा भएको संविधानसभाको निर्वाचनमा रौतहट र काठमाडौंबाट पराजित नेता नेपाललाई भारतकै चाहनामा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बनाएको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा चलेको थियो । नेकपाको नेता मध्ये धेरै विदेश भ्रमण गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार गर्ने नेतामा पर्ने नेता नेपालसँग अहिले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी कुरा गर्न अनइच्छुक देखिए । भारतसँग नजिक देखिएकै कारण उनीसँग चीन विश्वस्त हुन नसकेको नेताहरुले बताउने गर्छन् । तर, उनै नेता नेपाल आफ्नो देशको सार्वभौमसत्ताको विषयमा कुरा गर्न जान खोज्दा भारतले समय नमिलाएको हो ।
कुटनीतिकस्तरबाट भएको छलफलले समस्या समाधान नभए प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना भारतीय समकक्षी मोदीलाई फोन गर्ने बताएका छन् । केही दिन अघि कान्तिपुर टेलिभिजनबाट प्रसारित फायरसाइडसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए, ‘यसमा मोदीजी र मेरोबीचमा कुरा नहुने केही छैन । उहाँ र मेरोबीचमा पनि कुरा हुनसक्छ । विभिन्न तहमा कुरा हुनसक्छ । पहिले त यो अरु तहबाटै कुरा भएर टुंगिन पनि सक्छ । टुंगिएन भने हाम्रो तहबाट कुरा हुन्छ । हामीसँग प्रमाण भइसकेपछि हामीलाई कुरा गर्न अप्ठेरो त भएन नि ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले विशेष दूत पठाएर समस्याको समाधान खोज्न चाहे पनि भारतीयपक्ष भने अनुदार देखिएको छ । वार्ताका क्रममा नेपाल सरकारले वि.सं. १९९७ मा बैतडी गौंडामा तिरो तिरेको रसिददेखि विभिन्न अभिलेख र दस्तावेज प्रमाणका रुपमा राख्ने तयारी गरेका बेला भारत छलफलमा बस्न नचाहेको हो । cnp